Maxkamad Baabi’isay Go’aankii Kenya Ee Ahaa In La Xiro Xeryaha Qaxootiga » Axadle Wararka Maanta
Maxkamad baabi’isay go’aankii Kenya ee ahaa in la xiro xeryaha qaxootiga
Nairobi (Axadle) – Xaakim Kenyan ah ayaa ka soo horjeestay go’aanka dowlada Kenya ay ku xireyso laba xero oo qaxooti boqolaal kun oo dad ah oo badankood ka yimid dalka soomaaliya sida lagu sheegay nuqul ka mid ah go’aanka. Maxkamad ay aragtay Reuters.
Labo todobaad ka hor Wasiirka Arimaha Gudaha ee Kenya Fred Matiang’i ayaa shaaca ka qaaday in dowladiisa ay damacsan tahay in ay xirto xeryaha waxa uuna u qabtay Hay’ada Qaramada Midoobay u qaabilsan Qaxootiga ee UNHCR labo todobaad in ay ku soo bandhigto qorshayaasheeda xiriitaanka. Fred, wuxuu intaas ku daray inaysan sii wadi karin inay sare u qaado wadaxaajood kasta oo dheeraad ah oo laga fogaado xeryaha lagu hayo.
Go’aanka garsooraha ayaa burinaya qorshihii dowlada ee bil. Tallaabadan ayaa timid markii siyaasiyiinta maxalliga ah, oo lid ku ah qorshaha, ay maxkamadda ka codsadeen in laga qaado tallaabada ay dowladda ku xireyso xeryaha.
Kiiska oo ka dhanka ah qorshayaasha ay dowlada Kenya ku dooneyso inay ku xirto xeryaha ayaa dib loogu celin doonaa maxkamada bil kadib.
Xeryaha qaxootiga ee Dhadhaab iyo Kakuma ee waqooyiga Kenya waxaa ku nool in ka badan 410,000 oo qof oo Soomaali u badan. Tiro yar oo ka mid ah dadkan ayaa ka yimid Koonfurta Suudaan.
Iyagoo tixraacaya dhibaatooyinka amniga qaranka, ayay saraakiisha Kenya ku dhawaaqeen inay qorsheynayaan in la xiro xerada qaxootiga ee Dhadhaab sanadka 2016, kaasoo aad ugu dhow xadka Soomaaliya marka loo eego Kakuma.